Imakethe yethu Yomhlaba Wonke
Imikhiqizo yethu njengamanje ithengiswa e-United States, Canada, Australia, Malaysia, Japan, United Kingdom, New Zealand nakwamanye amazwe amaningi. Ukuze sikhonze kangcono izimakethe ezinkulu zesifunda, sesimise izinqolobane eziyisithupha ezinkulu zaphesheya kwezilwandle, izikhungo zocwaningo nentuthuko kanye nesenti lokukhiqiza ...
Isingeniso seqembu lethu lobuchwepheshe
Sineqembu le-R & D eliqeqeshiwe. I-R & D nesisekelo sokukhiqiza sihlanganisa indawo engaba yizinyawo ezingama-10,0000 square. Sinikeza ama-radiator wemoto aguquliwe ngokusebenza okupholile futhi sithuthukise imikhiqizo emisha engaphezu kwama-500. Okwamanje kunezinhlobo ezingaphezu kuka-700 eziguqulwe ngemoto zeradiator nokunye ...
I-Automechanika Istanbul 2020
IShanghai West Bridge Inc. Co, Ltd. ibikhona ohlelweni lwakamuva lwe-Automechanika, umbukiso obaluleke kakhulu embonini yezimoto, eyenzeka ngoNovemba eShanghai. Inkampani yethu isebenza kusukela ngo-2011 ukuze yanelise izidingo zamakhasimende ngekhwalithi ephezulu ...